Xaalada dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha Baydhabo oo laga soo deyrinayo – SBC
Xaalada dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha Baydhabo oo laga soo deyrinayo
Sida ay ku waramayaan wararka ka imanaya magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay waxaa halkaasi ka taagan xaalad nololeed oo aad u daran taas oo ay soo foodsaartay dadka ku jira xeryaha qaxooti ee magaaladaas ku yaala .
Xaaladan ayaa ah mid ka sii dareysa waxaana jirtay maalmo ka hor in magaaladaasi ay ka degtay diyaarad siday mucaawimo loogu talagalay dadkaasi oo ka socotay qaramada Midoobay balse majirto weli wax la qeybiyay oo la gaarsiiyay dadka rayidka ah ee ku dhibaateysan halkaasi.
Dadka barakacayaasha ee ku jira xiryahaasi ayaa waxaa ay saxaafada u sheegeen in ay si aad ah ugu baahanyihiin gar gaar deg deg ah iyagoona intaasi raaciyay in gargaarka la soo gaarsiiyay magaalada ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu qeybiyaan dadka gacanta ku haya.
Magaalada Baydhabo waxaa gacanta ku haya xarakada Alshabaab oo dhowaan shaacisay in dadka barakacayaasha ah ee ku dhibaateysan gudaha xeryaha qaxooti in la soo gaarsiinkaro gar gaar maadaama mudo ka hor ay diideen in dalka ay ka shaqeeyaan hay’adaha samafalka.
Iyadoo taasi laga duulayo ayaa waxaa maalmo ka hor halkaasi ka degay Diyaarad u siday dadka tabaaleysan mucaawino cuno iyo daawo isugu jirta inkastoo aanay iminka weli Helen oo aan lolo qeybin.
Sikastaba ha ahaatee xaalada nololeed ee dadka barakacayaasha ah ee Baydhabo ayaa ah xaalad ka sii dareysa iyagoo qaarkood dadkaasi sheegay in hadii aysan helin gar gaar deg deg ah ay xaaladoodu noqondoonto in geeri fooda saarta.